Sagantaa too'annoo gara sagantaa xiqqoo,faankishinii ,ykn adeemsa DLL tti dabarsi.
Maqaa: Maqaa sagantaa xiqqaa,faankishinii , ykn DLL waamuu barbaadde.
Ulaagaa: Ulaagaalee adeemsatti dabarsuu. Gosti fi lakkoofsi ulaagaalee ruutinii raawwatamu irratti hundaa'a.
Yoo adeemsa waamtu jeefuraan dirqalee dha. Yoo faankishiniini akka himannoo tti raawwate,ulaagaaleen sarara dallaan hima keessatti golgamu. Yoo DLL'n waamame, jalqaba Declare-Statement keessatti dirqama ibsama.